Tsy mitaky diplaoma be mantsy izy io fa BEPC fotsiny ihany no ilaina na ho an’ny lahy na ho an’ny vavy feno 18 taona dia efa mety raha am-bolana kosa no hanaovana ny fiofanana ka tafiditra ao ny fampianarana teny anglisy izay tena ilaina be tokoa rehefa eny ambony sambo. Ho an’ny “Centre de formation maritime de Madagascar” eny Antanimena manokana dia tena mirodorodo tokoa ireo tanora manaraka izany. Tapa-bolana no fiandohan’ny fiofanana izay hanaovana fidinana ifotony avy hatrany any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina na Mahajanga mihitsy. Olona tantsambo avokoa no manofana amin’izany raha araka ny fanazavan-dRakotoherivao Ando, tale jeneraly lefitra eo anivon’ny cefomar. Tsy mijanona eo anefa ny fiofanana ho an’ireo izay tena te ho lasa mpiasa eny ambony sambo fa mitohy hatrany, roa herinandro isaky ny mandeha mandrapahavitany tanteraka. Andiany faha-35 no hihazo an’i Toamasina amin’izao fidirana izao raha andiany faha-24 kosa ny an’i Mahajanga.